5 Waxyaabood Oo Lama Huraan Ah Inaad Barato Hadii Aad Doonaysid Inaad Abuurto Ganacsi Guulaysta - iftineducation.com
5 Waxyaabood Oo Lama Huraan Ah Inaad Barato Hadii Aad Doonaysid Inaad Abuurto Ganacsi Guulaysta
aadan21 / November 23, 2014
iftineducation.com – Wuxuu noqday sida badan sida badan ganacsiga midka ugu fiican ee shaqo ay qabtaan dadka taa ay suura gal tahay in ay ku raadiyaan shaqooyin ama ay suura gal tahay inay sub sadaan mashaariic ayaga qaas u ah kanaalka loo yaqaabo ABC ee dalka maraykanka ayaa u istaagay in uu soo saaro barnaamij TV ah kaa soo lagu magacaabo Sharktank kaa oo u shabaha barnaamijka xidagaha waxbarashada ay ku soo bandhigi jireen afkaartooda ku aadan ganacsiga.
Tani waa daraaso muhiim ah ayna waajib tahay in uu barto qofka jecel in uu abuuro ganacsi xitaa hadii aad tahay mid aanan la kulmin fariintan hadana waa talooyin muhiim ah.
1-Noqo mid qiiro badan:
Si aad u noqoto mid guuleysta waa in aad noqotaa qof fir-fircoon si aad u wado shaqadaada aadna uga hortagto dhibaatooyinka qaaska ah aadna ugu kalsoonaato waxaad qabaneyso xitaa haday u arkaan dadka kale waxaad qabaneyso inaysan faa’ido lahayn.
2-Inaad leedahay fir-fircooni sare:
Fir-fircoonida iyo awooda waa fulinta iyo go’aan qaadashada waana sifo ka mid ah sifooyinka in uu yeesho qofka sumcad iyo sharaf sidaa darteed hadii aad tahay mid raba in uu wax qabto waa in aad soo bandhigtaa in aad awood u leedahay inaad wax qaban kartid.
Waxaa waajib ah in aad doorato koo adag si uu u noqdo qorshahaaga mid fula gaar ahaan hadii ay yihiin kuwo qiiro badan iyna leeyihii awood sare ayna yihiin dad isku kalsoon waa hubaal in ay qaban karaan wax walba oo shaqo ah.
4-In aad soo bandhigto fikir kaaga:
Nolosha waxaan qaabilnaa si lama filaan ah hadii ay noqoto baabuurta ama wadada dadyaw farabadan sidaa darteed hadii aad uga sheekeyso mashruucaaga dadka adiga kuugu dhaw waxaa laga yaabaa in aad ka hesho mid ka mid ah dadkaasi fikir aad u wanaagsan waxtarna kuu leh adiga, marka isku day had iyo jeer waxa ka dhax guuxaya maskaxdaada.
5-Waa in aad lahaataa qorshooyin fara badan:
Ugu horeyntii iftin ayaa ku lh waa in aad sameysaa hal qorsho si aad wax ugu bilaawdo laakiin waxaa muhiim ah in aadan ku fikirin in qorshahaasi kaliya aad guul ku gaari karto maxaa yeelay waxaad la kulmeeysaa dhibaatoyin fara badan iyo culeesyo kala duwan taa oo laga yaabo in ay fashiliso waxqabadkaaga sidaa dar teed waa in aad lahaataa qorshooyin fara badan.
Dhacdo qalbigaaga taaban doonta “Gabadh Dil ka badbaadey “
Masaajid laweeraray iyo policeka kenya oo difaacay loo keenay